Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Caawinta Guri La'aanta|Xafiiska Dhalinyarada Hoy La'aanta ah
Riix halkan loogu talagalay macluumaadka la xiriira COVID-19 ee loogu talagalay adeegga hoy la'aanta iyo deeq bixiyeyaasha guryaha ee la awoodi karo
Macluumaadka iyo Hanuuninta deeq bixiyaasha OHY Inta lagu gudajiray Dhibaatada COVID-19
Warqad loo qoondeeyay OHY deeq bixiyaasha oo ku saabsan kharashyada uqalma Inta lagu gudajiray Dhibaatada COVID-19 (PDF)
Dhererka Xadka Joogitaanka Sariiraha RAJADA Oo La Qaaday Xilligii Xiisadda COVID-19 (PDF)
OHY COVID-19 FAQ (PDF)
Tilmaamaha Ku-meelgaarka ah ee Coronavirus ee Adeeg Bixiyeyaasha Guri La'aanta ah (Waxsansheeg News)
Waaxda Carruurta, Dhallinyarada iyo Qoysaska COVID-19 Cusboonaysiinta
Sahayda si aad u sii ahaato mid ammaan ah inta aad ka bixinayso wacyigelinta ku saleysan dariiqa shaqaalaha Isbahaysiga Dhimista Dhimista (PDF)
Habeen kasta, kumanaan dhalinyaro guri la 'ah oo ku nool Washington waxay seexdaan iyagoo aan haysan amni, xasillooni, iyo taageero qoys ama guri. Waxaa la abuuray 2015, Xafiiska Ka Hortagga iyo Barnaamijyada Ka Hortagga Dhallinyarada Hoy la'aanta ah (OHY) wuxuu hoggaamiyaa dadaallada gobolka oo dhan si loo yareeyo oo looga hortago hoy la'aanta dhalinyarada iyo dadka waaweyn iyada oo loo marayo shan goobood oo adeegyo mudnaan leh si loo hubiyo in dhallinteenna iyo dhallinyaradeenuba ay leeyihiin:
Guryeynta Deggan - Qof kasta oo dhalinyaro ah wuxuu leeyahay meel amaan ah oo caafimaad leh oo uu seexdo habeenkii.
Dib u heshiisiinta Qoyska - Qoysasku way midoobaan markay aamin yihiin oo ay habboon yihiin.
Xidhiidhada Joogtada ah - Dhallinyaradu waxay leeyihiin fursado ay xiriir wanaagsan oo caafimaad leh kula yeeshaan dadka waaweyn.
Waxbarashada iyo Shaqada - Dhallinyaradu waxay haystaan ​​fursado ay ku horumariyaan waxbarashadooda ama tababbarkooda oo ay shaqo ku helaan.
Nolosha Bulshada iyo Dareenka - Dhallinyaradu waxay heli karaan daryeel caafimaad oo dabeecadeed iyo mid jireed; adeegyadu waxay kobciyaan qof kasta oo dhalinyaro ah xoogiisa iyo karti ahaanba.
Waxaan lashaqeynaa wada-hawlgalayaasha iyo jaaliyadaha sidii loo dhisi lahaa maal-gelin socota, mustaqbal, siyaasad, iyo dhaqannada ugu wanaagsan ee la xiriira hagaajinta nolosha dhalinyarada hoylaaweyaasha ah ee Washington. Maalgelinta Xafiiska Dhallinyarada Hoylaawayaasha ah waxaa si gaar ah loogu qoondeeyay lix barnaamij, oo mid walboo ujeedkiisu yahay bartilmaameed, laga wada shaqeynayo kordhinta ladnaanta dhalinyarada iyo dhalinyarada.
Bixiyeyaasha Adeega Dhalinyarada (PDF)
Xarumaha Degenaanshaha Dhibaatooyinka
Deganaansho kumeelgaar ah, qiimeyn, gudbin, iyo adeegyo qorsheyn joogto ah oo lagu bixiyo tas-hiilaad amni iyo nabadgelyo leh oo loogu talogalay dhalinyarada da'doodu tahay 12 illaa 17 ee isku dhaca qoyskooda, ka cararay guryahooda, ama caafimaadkooda iyo amnigooda ay halis ku jiraan.
Deganaansho kumeelgaar ah, qiimeyn, u diritaan, iyo adeegyo qorsheyn joogto ah oo loogu talagalay dhalinyarada dariiqyada kayar 18 sano.
Barnaamijka Guryeynta Dhalinyarada ee Madaxa Banaan
Caawinta kirada iyo maaraynta kiisaska dhalinyarada uqalma ee ka da 'ah nidaamka daryeelka ilmo korsiga ee gobolka. Kaqeybgalayaashu waa inay udhaxeeyaan 18 iyo 23 sano, ay ku tiirsanayeen gobolka waqti kasta inta lagu gudajiray mudada afarta bilood ah ee kahoreysa dhalashadiisa 18aad, ayna buuxiyaan u qalmida dakhliga. Mudnaanta waxaa la siiyaa dhalinyarada qaangaarka ah ee ku tiirsanaa gobolka ugu yaraan hal sano.
Adeegyada Dhalinyarada ee Street
Adeegyada Dhalinyarada ee Wadooyinka (SYS) waxay isku xiraan dhalinyarada ka yar 18 sano adeegyada iyo ilaha iyadoo loo marayo dariiqa iyo wacyigelinta bulshada ku saleysan. Adeegyadu waxay ku jiri karaan si toos ah ama gudbinta faragelinta xadgudubka mukhaadaraadka / khamriga, faragelinta dhibaatooyinka, la-talinta, helitaanka hoyga degdegga ah ama guryaha, ka hortagga iyo waxqabadyada waxbarashada, dhisidda xirfadaha shaqada, u-qareemeynta, adeegyada diirada saaraya qoyska, iyo taageerada dabagalka.
Hoyga Dadka Waaweyn ee Da 'yarta ah
Gurmadka, hoyga ku meel gaarka ah, qiimeynta, gudbinta, iyo adeegyada qorshaynta joogtada ah ee dhalinyarada qaangaarka ah ee 18 ilaa 24.
Barnaamijka Guriyeynta Dadka Waaweyn
Kheyraadka caawinta kirada, guryaha ku meel gaarka ah, iyo maaraynta kiisaska dhalinyarada qaangaarka ah 18 ilaa 24.
Barnaamijka Bandhiga Bandhig-la’aanta dhalinyarada
Barnaamijka Mudaaharaadka Hooy La'aanta Dhallinyarada (YHDP) ayaa looga golleeyahay in lagu yareeyo tirada dhallinyarada la kulma hoy la'aanta. Ujeeddada YHDP waa in la taageero bulshooyinka la soo xulay, oo ay ku jiraan miyiga, miyiga iyo magaalooyinka ku baahsan Mareykanka, horumarinta iyo hirgelinta hab isku -duwaha bulshada si looga hortago oo loo soo afjaro hoy la'aanta dhallinyarada. Isku-dheelitirka Gobolka Washington (WA-BoS) wuxuu helay abaalmarin 2018 si uu uga faa'iideysto 23ka degmo ee ugu miyiga badan Washington.
Ma u Baahan Tahay Caawimaad?
Haddii adiga ama qof aad taqaanid u baahan yahay caawimaad, waxaad ka heli kartaa caawimaad adoo adeegsanaya 211 Shabakadda Macluumaadka Washington.
Haddii aad tahay qof dhalinyaro ah oo ka fikiraya inuu cararo ama horay u sii waday, waxaad si qarsoodi ah ula hadli kartaa qof Safeline-ka Baxsadka Qaranka: 1-800-RUNAWAY ama 1-800-786-2929
Xafiiska Caawinta Farsamada ee Dhalinyarada Guri La'aanta ah
Xafiiska Guddiyada Dhallinyarada Hoylaawayaasha ah iyo Kooxda Shaqada
Kheyraadka loogu talagalay ka bixida dhallin-yarada daryeelka korinta fidsan
Qorshaha Istiraatiijiyadeed ee Hordhaca ah ee Kahortagga Hoyga Dhallinyarada
Istaraatiijiyado cusub oo xog-xog-ogaal ah si looga caawiyo dhalinyarada inay ka baxaan guryo aamin ah oo deggan
Gudiga Hogaaminta ee kahortaga hoy la'aanta dhalinyarada
Dhalinyarada Ku Nool Khabiirka RFQQ
Barnaamijka Ku-meel-gaadhka Ku-meelgaarka ah Dukumentiyada RFQQ
Adeegyada Daaweynta Ka-hortagga Ka-hortagga Documents RFQQ
Saxiix si aad u hesho wixii cusbooneysiin ah ee Xafiiska Dhallinyarada Guri la'aanta ah
Xafiiska Shaqaalaha Dhallinyarada Hoylaawayaasha ah
Agaasime ku xigeenka
Maareeyaha Hindisaha Gobolka oo dhan
Maareeyaha Beddelka Nidaamyada
Cilmi baaris, Xog, iyo Warbixinno
Adeegyada iyo Nidaamyada Beddelka ah si looga hortago Deggenaanshaha Guriyeynta Dhallinyarada (PDF)
Guri La'aanta Ka Mid ah Nidaamka Daryeelka Dhalinta ee Ka Baxaya Gobolka Washington (PDF)
Qoysaska iyo Dhalinyarada Dhibaatada ku jirta (PDF)
Xuquuqda Dhallinyarada iyo Dadka Waaweyn ee Da 'yarta ah ee Barnaamijyada Degenaanshaha (PDF)
Hagaajinta Xasiloonida Nidaamka Daryeelka Dhalinta ka Baxaya (PDF)
Daraasada Adeegyada Dhalinyarada Guri La'aanta ah (PDF)
Warbixinta Kooxda Shaqada ee OHY 2017 (PDF)
Xafiiska Khariidadda Deeqaha Dhallinyarada Guri-la'aanta ah (PDF)
Cilmi baaris iyo Talooyin ku saabsan Barnaamijyada Guryaha Martida loo yahay (PDF)
Xaaladda Guriyeynta ee Dhallinyarada Ka Baxaysa Daryeelka Korsashada, Caafimaadka Habdhaqanka iyo Nidaamyada Caddaaladda Dambiyada (shabakad)
Guri la'aanta Dhalinyarada ee Washington - Muuqaalka Muuqaalka(shabakad)
Xafiiska Warbixinta Dhallinyarada Hoylaawayaasha ah 2016 (PDF)
Warbixinta Horumarka 2018 (PDF)
Jidka Guriga Washington (shabakad)
Xarunta Campion (shabakad)
Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka, Cilmi baarista iyo Falanqaynta Xogta (shabakad)
Bulshada Mockingbird (shabakad)
Isbahaysiga Qaranka si loo Joojiyo Hoy la’aanta (shabakad)
Wada-hawlgalayaasha Carruurteenna (shabakad)
Aasaaska Raikes (shabakad)
Sanduuqa Dhallinyarada iyo Qoysaska ee Washington (shabakad)
Isbahaysiga Gobolka Washington ee u doodista dhalinyarada hoylaawe ah (shabakad)
Resources la xiriira
Xilliga Sannadlaha ah ee Tirinta Waqtiga
Deeqda Xalka Degdega ah
Kaalmada kireysiga ee ku saleysan kireystaha (TBRA)
Nidaamka Macluumaadka Maareynta Hoyga (HMIS)
Golayaasha hoylaawayaasha ah